Mucaarida naxaasiga ah, naxaasta, kululeeyaha dusha sare leh
Isticmaalka kuleylka kuleylka
Faa'iidada Hoos-u-qaadista kuleylka
geedi socodka waditaanka annealing
Isku xidhka isdhexgalka
Cadaadin wax lagu dhejiyo
Fal-kuliyaha Kuleylka Induction
Ka saarista qashin-qubka
Iska ilaali Xirfadaha
Tubbo iyo Tube
Taxanaha Heerka Sare
Taxanaha Heerka Joogtada ah
Taxanaha Joogtada Aadka u Dheer
Mashiinka alxarka Ultrasonic
Xiinka Xiinka Xiinka
15KHz Xiinka Xiinka
20KHz Xiinka Xiinka
35KHz Xiinka Xiinka
40KHz Xiinka Xiinka
Taxanaha Induction KGPS
Mashiinka Sifeynta Induction
Kululeeyaha qaboojinta hawada
Mashiinka PWHT Induction
Foosto dhalaalid ah oo dhalaalaya
Foornada Aluminiumka Rakaabka
Foornada Cabbitaanka Baadhista
Foornada dahabka dhalaalaysa
Foorno Dhuxul ah oo bir ah
Foornada Roogga Dhalada
Foornada Dhuxusha ee Dhuxusha
Heer-qabatada Indhasharada gacanta
Machine Hardening Induction
Coils Air Coils
Soo-saarista Uumeeyaha Uumeeyaha
Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Teknolojiyada kuleylka hawada
Soojiidashada kululaynta PDF
Bogga ugu weyn / Codsiyada / Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka / Induction Indhaha
Category: Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka Tags: geesinimo ku biirista nidaamka, induction brazing, geedi socodka geesinimada leh, geedi socodka daciifinta kuleylka wadida, brazing induction, Mishiinka Sedaxda, Soo saaraha mashiinka mashiinka induction, kululaynta laalaabashada ee loogu talo galay biraha
Waa maxay xayawaanka induction?
Dhaqdhaqaaqa wax-qabadka waa qalab-is-dhexgalka oo isticmaalaya biraha fiilaha ah (iyo badanaaba ka-soo-saaraha ka-soo-baxsan ee loo yaqaan 'fluid oxidizing') kaas oo ku biiri kara laba qaybood oo birta ku xiran oo aan dhumin qalabka saldhigga. Taa baddalkeeda, kuleylaha ayaa lagu dhalaaliyaa fiilaha, taas oo markaa la geynayo qalabka aasaasiga ah ee ficillada gunta.
Maxay yihiin faa'iidooyinka?
Kicinta indha-indheynta wuxuu ku biiri karaa noocyo kala duwan oo ah birta, xitaa shiidan aan la gashanayn. Gubashada induction waa sax oo degdeg ah. Meelaha la qeexay oo kaliya ayaa la kululeynayaa, iyagoo ka tagaya aagagga agagaarka ah iyo walxaha aan la ilaalin. Isku-dhafka saxda ah waa mid xoogan, ka-daadsan iyo u-adkeysi. Waxay sidoo kale yihiin kuwo aad u fiican, badanaa waxay u baahan yihiin xejin dheeraad ah, xoqin ama dhammeystiraan. Kalluunka induction wuxuu ku haboon yahay in lagu daro khadadka wax soo saarka.
Xagee loo isticmaalaa?
Nidaamka daba-galka DaWei Induction waxaa loo isticmaali karaa shaqeyn kasta oo adag. Ilaa hadda, nidaamkeena waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa warshadaha korontada ku shaqeeya si ay u kala saaraan qaybaha korontada iyo bedelayaasha sida baararka, xargaha, qoryaha, faashadaha iyo SC-siddeedda. Waxay sidoo kale xirtaan tuubooyin shidaal iyo AC iyo qaybo kala gedisan oo ku yaal warshadaha baabuurta. Qaybta aeronautics waxay isticmaashaa induction si ay u duxdo daboolka daboolka, daboolka qashinka, iyo shidaalka iyo nidaamka hidaha. In warshadaha sayniska ee our nidaamyada naqshadaynta qaybaha kombiyuutarada, walxaha kululaynta iyo qasabadaha. Qalab noocee ah ayaa la heli karaa? Our Xalalka induction brazing sida caadiga ah waxaa ka mid ah nidaamka kuleylka Daewe ee gacanta lagu dhigo.
Kumbuyuutarrada Badeecadda Baaxadda leh
Qalabka kulaylka DW-HF-120kw Induction
Induction Brazing Stainless Steel si aad u naxiso
Qalabka Badeecadda Badeecadda lagu Qaadayo
Soo hel Baadhitaan
Habka Kuleylka Daaweynta Kuleylka
Ku biirista birta xargaha iyo alxanka
RPR Ka saarista Dhuumaha Xididada RPR
RPR Induction Stripping-Induction Rust & Rinjiyeynta Rinjiga Rinjiga
Induction Preheating Tubbooyinka Tuulooyinka
Induction Aluminium Brazing oo leh Kumbuyuutar Caawinaya
Habka Dusha sare ee Induction adkaanta
induction kululeynta codsiyada caafimaadka iyo ilkaha
Kuleylka Kuleylinta Tijaabinta Kuleyliyaha
Caarada carbide indha indheynta induction ee ilkaha madaxa birta
Qalabka kuleylka kuleylka
Mashiinka ka saarida caaga kuleylka
Kuleylka Ka saarista Induction kululeeyaha
Ka saarida Induction Daboolida oogada
Kuleylka Badeecada Marawaxada ee Alxanka
induction Cadaadiska Maraakiibta Kuleylka
MAN SOO SAARAHA QALABKA SOO SAARKA QALABKA EE HLQ 2021